Sawirro:-Haweeney Sacuudiyan ah oo walaac ka muujisay in dib loogu celiyo dalkeeda – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Sawirro:-Haweeney Sacuudiyan ah oo walaac ka muujisay in dib loogu celiyo dalkeeda
By Webmaster	 On Jan 7, 2019
Haweeneydasi oo lagu magacaabo Rahaf Maxamed Al-qunuun ayaa lagu hayo Hotel ku dhex yaalla Garoonka Diyaaradaha ee caasimadda dalka Thailand ee Bankok.
Haweeneydaasi oo 18-jir ah ayaa u sheegtay Wakaalladda Wararka AFP in la dili doono haddii dib loogu celiyo Sacuudiga, waxayna codsatay inay la kulanto Hay’adda QM ugu qaabilsan Arrimaha Qaxootiga ee UNHCR.
Wxaay kaloo sheegtay inay doonayso in magangelyo laga siiyo dalka Australia, balse ilaa haatan Dowladda Australia kama aysan hadlin arrintaasi.
Rahaf Maxamed Al-qunuun waxay sheegtay inay Saraakiil Sacuudiyaan iyo kuwo Kuwait ay iyada ku joojiyeen markii ay ka soo degtay Garoonka Diyaaradaha ee Suvarnabhumi airport, isla markaana ay si khasab ah uga qaadeen Baasaboorkeeda.
“Waxay iga qaateen Baasaboorkayga” ayey tiri, iyadoo dhinaca kalena sheegtay in Ninkii iyada ilaalaha u ahaa u sheegay inaysan bixi karin ilaa uu ka fasaxo.
Hay’adda QM ugu qaabilsan Arrimaha Qaxootiga ee UNHCR waxay taageertay Eedeynta ay Haweeneydaasi ku sheegtay in si khasab ah looga qaaday Baasaboorkeeda..
Rahaf Maxamed Al-qunuun waxay sheegtay inay ka soo baxsatay Qoyskeeda, kuwaasi o oay ku eedeysay inay u geysteen Tacadiyo maskax ahaan iyo jir ahaan leh.
Waxay kalo osheegtay inay Qoyskeeda ka mamnuuceen inay baxdo, isla markaana ay muddo 6 bilood ah ku xirnayd qol.
Mar wax laga weydiiyey sababaha ay Qoyskeeda ka caroodeen waxay sheegtay inay timaha iska jartay.
Waxay walaac ka muujisay haddii dib loogu celiyo Sacuudiga, waxay sheegtay in mar kale la xiri doono.
“Waxaan hubaa in 100% ay I dili doonaan sida ugu dhaqsaha badan marka la iga soo saaro Xabsiga Sacuudiga” ayey tiri Raxaf Maxamed Al-qunuun.
Waxayna sii raacisay inay tahay qof ka quustay rajada.
Taliyaha Hay’adda Socdaalka ee dalka Thailand, Surachate Hakparn oo la hadlay Wakaalladda Wararka ee AFP ayaa xaqiijiyey in Haweeneydaasi laga joojiyey inay gudaha u soo gasho dalkaasi, kadib, markii ay maalintii shalay ee Axadda ka soo degtay Diyaarad Rakaab oo ka timid dalka Kuwait.
Taliyaha waxa uu sii raaciyey inaysan Haweeneyda u dhalatay Sacuudiga haysanin Dukumentiyo dheeraad ah, sida Tikidhkii ay ku laaban lahayn ama Lacag, wuxuuna carrabka ku dhuftay inay haatan ku sugan tahay Hotel ku dhex yaalla Garoonka.
“Waxay ka soo carartay qoyskeeda iyadoo diidan Guur, waxayna walaac ka muujisay inay dhibaato mudan karto haddii dib loogu celiyo Sacuudiga” ayuu yiri Taliyaha Hay’adda Sirdoonka ee dalka Thailand, oo intaasai ku daray inay Saraakiil u xil-saareen si ay daryeel u siiyaan haweeneydaasi.
Waxa kale oo uu qiray inay xiriir la sameeyeen Safaaradda Sacuudiga ee magaalladda Bankok, wuxuuna hoosta ka xariiqay in Haweneydaasi maanta oo Isniin ah dib loogu celin doono Sacuudiga.
Qoraal ay Rahaf Maxamed Al-qunuun soo dhigtay barta Twitter-ka ayey ku codsatay in laga taageero sidii lagu joojin lahaa in dib loogu celiyo dalka Sacuudiga, waxayna xustay in la doonayo in si khasab ah loo saaro Diyaaradda Kuweyt ee Duullimaadka Lambarkeedu yahay 412.
Wxaay kaloo sheegtay inay Taransik ku ahayd Thailand, si ay magangelyo uga hesho dalka Australia.
Dhinaca kale, PHIL ROBERTSON oo ah Ku-xigeenka Agaasimaha Hay’adda Human Rights Watch ugu qaabilsan Qaaradda Asia, waxa uu Bartiisa Twitterka ku sheegay inay Guul weyn u tahay Rahaf Maxamed Al-qunuun, kadib, markii aan iyada si khasab ah lagu saarin Diyaaradda Shirkadda Diyaaradda ee Kuwait Airlines ay saakayto ka duushay Garoonka Bankok, iyadoo aan xoog lagu saarin Haweeneydaasi.
Si kastaba ha ahaatee, Wargeyska The Guardian ee ka soo baxa magaalladda London waxa uu saakayto qoray in Gabar u dhalatay Sacuudiga oo 20-jir oo hataan ku nool dalka Australia ay sheegtay in Rahaf Maxamed Al-qunuun horey u ahayd qof Muslim ah, isla markaana ay Qoyskeeda kala kulantay tacadiyo badan.
Wargeyska ma carabaabin magaca Haweeneyda uu soo xigtay, taasi oo sheegtay inay Rahaf Maxamed Al-qunuun hanjabaadyo ka heshay wiil ay ilmo-adeer yihiin, kaasi oo ugu hanjabay inuu dili doono.
Dhageysiga Khudbadaha musharixiinta Madaxweynaha Puntland oo ka socota….
Sawirro:-Milliteriga Dalka Gaaboon oo la wareegay Talada dalkaasi